Hai-fitsipi-pitondran-tena sy hai-adidy: Vita sonia ny fanavaozana ny fifanarahana eo amin’ny Ministeran’ny Fitsarana sy ny MEDEM
Laharam-pahamehana ny fahadiovana sy fahamendrehana na eo amin’ny toetra na ny fomba fisainana anaty fanatontosana ny asam-pitsarana. Tafiditra anaty lalan-tsaina apetraky ny Filohan’ny Repoblikan’i Madagasikara ny fitantanana anaty fanajana ny hai-fitsipi-pitondran-tena sy ny hai-adidy. Ho fandalàna izay indrindra no nanaovana sonia, androany Alatsinainy 11 Oktobra 2021, ny fanavaozana ny fifanarahana eo amin’ny Ministeran’ny Fitsarana sy ny Fikambanana « Mouvement Ethique et Déontologique de Madagascar (MEDEM), izay adika amin’ny hoe « Fampivoarana ny Hai-fitsipi-pitondran-tena sy ny hai-adidy eto Madagasikara ».
Araka ny fanazavana nentin’ny Filohany, Ramatoa RATSIHAROVALA Lala Henriette, dia tamin’ny 26 Martsa 2008 no nitsangana ny MEDEM ary ny taona 2009 no nanomboka nisian’ny fifanarahana eo aminy sy ny Ministeran’ny Fitsarana. Havaozina isaky ny 2 taona ny fifanarahana. Tanjon’ny MEDEM ny fametrahana ny tany tan-dalàna, ny fanajana ny zon’olombelona, ny famerenana ny fitokisan’ny vahoaka amin’ny Fitsarana Malagasy ary ny fanentanana ireo tanora amin’ny fandraisana andraikitra. Misy ny « Cellule Ethique et Déontologique » CED izay afaka atonin’ireo Mpitsara mivantana hakana hevitra, sy ho fiarovana ihany koa an’izy ireo amin’ny fanatanterahana ny asany. Ny taona 2005 tokoa mantsy vao nanomboka nisy ny « code de déontologie » ho an’ny Mpitsara.
Ho an’ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana, Andriamatoa IMBIKI Herilaza dia ilaina tokoa ny fahaizana sy ny fampiharana ny lalàna, saingy tsy ampy hoy izy izany, raha tsy misy ny toe-tsaina sy toe-panahy mila ananana. « Mafy ny tsindry na amin’ny lafiny politika, na avy amin’ireo mpisehatra amin’ny toe-karena, na ireo minia te-hitsabaka sy za-dratsy amin’ny kolikoly. Noho izany dia tsy mahavita tena isika fa ilaina tokoa ny fisian’ny MEDEM hanome hevitra, toromarika sy fiarovana » hoy Andriamatoa Minisitra.
← Firaisan-kina eo anivon’ny Ministeran’ny Fitsarana : Notolorana mari-pankasitranana ireo Minsitra teo aloha
Fiaraha-miasa amin’ny any ivelany : Nitsidika teto Faravohitra ny Masoivoho Italiana →